Fearless (2006) | MM Movie Store
မိမိတတျကြှမျးသညျ့သိုငျးပညာနဲ့ဂုဏျမောကျတတျသူဟျောရငျးဂြာ . အမွဲတမျးသိုငျးလောကတှငျနံပါတျတဈဖွဈလိုသညျ့သူ၏အတ်တ . သိုငျးပွိုငျပှဲအပွီးမိခငျနှငျ့ဖတဆိုးသမီးလေး၏အသကျမဲ့ခန်ဓာကိုမွငျလိုကျရသောအခါအရူးတပိုငျးဖွဈသှားခဲ့သညျ့ဟျောရငျးဂြာ . . . တဈဦးတညျးလြောကျသှားရငျကြေးရှာကလေးတှငျသံယောဇငျဖွဈခဲ့မိသညျ့မကျြမမွငျမလေး။
ထိုရှာကလေးတှငျသောငျတငျရငျးဟျောရငျးဂြာနရေပျဇာတိကိုအကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ပွနျရသောအခါဘာတှဆေကျဖွဈမလဲ. . . ဟျောရငျးဂြာသညျတရုတျဝူရှုးသိုငျးပညာကိုကမ်ဘာကသိအောငျဖှငျ့ပွခဲ့သညျ့တရုတျနိငျငံ၏အကြျောအမျောသိုငျးဆရာတဈဦးဖွဈသလိုကြှနျတျောတို့၏ယဈမနျးဟုလူသိမြားသညျ့ IPMan၏ဆရာလညျးဖွဈသညျဟုယူဆရပါသညျ။
ဒီဇတျကားလေးဟာ IMDb Rating 7.7အထိရထားသညျ့ဇတျကားဖွဈသညျ့အတှကျအမြိူးတှအေကွိုကျတှမှေ့ာအသအေခြာပါပဲလို့ပွောခငျြပါတယျ။ ကဲ ဒေါငျးလော့ခလုတျလေးအပွေးနှိပျလိုကျဦးစို့။
မိမိတတ်ကျွမ်းသည့်သိုင်းပညာနဲ့ဂုဏ်မောက်တတ်သူဟော်ရင်းဂျာ . အမြဲတမ်းသိုင်းလောကတွင်နံပါတ်တစ်ဖြစ်လိုသည့်သူ၏အတ္တ . သိုင်းပြိုင်ပွဲအပြီးမိခင်နှင့်ဖတဆိုးသမီးလေး၏အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုမြင်လိုက်ရသောအခါအရူးတပိုင်းဖြစ်သွားခဲ့သည့်ဟော်ရင်းဂျာ . . . တစ်ဦးတည်းလျောက်သွားရင်ကျေးရွာကလေးတွင်သံယောဇင်ဖြစ်ခဲ့မိသည့်မျက်မမြင်မလေး။
ထိုရွာကလေးတွင်သောင်တင်ရင်းဟော်ရင်းဂျာနေရပ်ဇာတိကိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ရသောအခါဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ. . . ဟော်ရင်းဂျာသည်တရုတ်ဝူရှုးသိုင်းပညာကိုကမ္ဘာကသိအောင်ဖွင့်ပြခဲ့သည့်တရုတ်နိင်ငံ၏အကျော်အမော်သိုင်းဆရာတစ်ဦးဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့၏ယစ်မန်းဟုလူသိများသည့် IPMan၏ဆရာလည်းဖြစ်သည်ဟုယူဆရပါသည်။
ဒီဇတ်ကားလေးဟာ IMDb Rating 7.7အထိရထားသည့်ဇတ်ကားဖြစ်သည့်အတွက်အမျိူးတွေအကြိုက်တွေ့မှာအသေအချာပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ကဲ ဒေါင်းလော့ခလုတ်လေးအပြေးနှိပ်လိုက်ဦးစို့။